Xijaab (dhar) - Wikipedia
Xijaab (; ) sidoo kale loo yaqaano Jilbaab, waa maro dabacsan oo ka samaysan dun, ama cudbi, ama harag kaasi oo la tolay looguna tallo-galay in dumarku xidhaan si u asturaan xubnaha jidhkooda. Jilbaabku wuxuu ka mid yahay dharka khaaska u ah dumarka. Sidoo kale waxaa jilbaabka aad caan uga yahay Dunida Islaamka taasi oo dumarku u xidhaas astaan diin ahaaneed. Meelaha qaar sida Gobolka Bariga Dhexe iyo deegaanada kale ee Dadka Carabta ah waxaa caan ka ah xidhashada xijaabka oo loo isticmaalo dhar ahaan. Dharka waxaa laga sameeyaa dun ka timaada haraga xoolaha, xayawaanka iyo cudbiga iyo noocyo aartifishal ah. Marka dharka la samaynayo waxa la isticmaalaa habab badan oo kala duwan, waxaa ugu caansan tolida, mareegida, iyo isku xidhxidhka dunta.
Gabadh Soomaali xidhan xijaab
Xijaabku waa shey dhar ah taasi oo laga tollo dun isla markaana aad looga istimaalo deegaanda ku dhaqan yihiin Muslimiintu halkaasi ooy ka tahay dhar ka mid ah dhaqanka dadka. Xijaabka waxaa maanta laga xidhaa meelo badan oo caalamka ah kuwaasi waxaa ka mid ah wadano badan oo Afrikaan ah iyo wadano reer Galbeed ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xijaab_(dhar)&oldid=170115"
Last edited on 22 Luuliyo 2017, at 07:58
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 22 Luuliyo 2017, marka ee eheed 07:58.